Mobilka ZTE ee hoos timaada magaca lambarka A0722 wuxuu helayaa shahaadada TENAA | Androidsis
In kasta oo ZTE khilaafyadii ugu dambeeyay la galay Mareykanka, shirkadda Shiinaha ma joojiso howlaheeda dibedda, iyo wax ka yar wadanka aad ka timid. In kasta oo, sida dhowaan lagu dhawaaqay, tan lagu xaliyay si nabdoon hoosta a heshiis.
Waa hagaag, sida mawduuca ugu muhiimsan, shirkaddu waxay ku soo bandhigtay qalab cusub TENAA, tanina waxay ku heshay shahaadada isla. Waxaan ka hadleynaa ZTE A0722, oo ah mobiil aynaan wax ka ogeyn magaca ganacsi ee uu suuqa la geli doono, maadaama aan qiyaaseyno inuu beddeli doono magiciisa, laakiin waxaan ognahay astaamahiisa muhiimka ah iyo tilmaamtiisa.
Sida laga soo xigtay keydka TENAA, ZTE A0722 wuxuu leeyahay shaashad 5.45-inch ah oo leh 1440 x 720 xalka pixels (HD +) oo ka hooseeya qaab 18 guddi ah:9. Isla mar ahaantaana, waxaa ku shaqeynaya processor octa-core ah oo leh saacad soo noqnoqota oo ah 1.4GHz, waana sababta aan ugu maleyneyno in shirkaddu ay dooran doonto Snapdragon oo ka socota taxanaha 400 ama Mediatek, haddii taa la waayana. Intaas waxaa sii dheer, xaqiijiyaha ayaa sheegaya inuu ku yimaado 3GB iyo 4GB RAM noocyo leh 32GB iyo 64GB keyd ah siday u kala horreeyaan.
Ilaa inta laga hadlayo qaybta sawirada, ZTE waxay hirgalisay 13 megapixel xallinta dareenka ugu weyn gadaal oo ku yaal geeska bidix ee kore, iyo 5MP hore toogte oo loo qoondeeyey qaadashada sawirrada iyo wicitaanka fiidiyaha.
Dhinaca kale, kumbuyuutarka wuxuu ku shaqeynayaa nooca Oreo 8.1 ee Android, wuxuu cabirkiisu yahay 147 x 69.5 x 7.9 mm, culeyskiisuna yahay 135 g, wuxuu leeyahay aaladda akhriska faraha oo gadaasha dambe kaga taal kaamerada agteeda waxaana ku rakiban batteri dhan 3.100mAh, shaki la'aan, waxay na siin doontaa ismaamul wanaagsan oo la aqbali karo. Tan waxaa sii dheer, markii la bilaabay, jaangooyaha Shiinaha wuxuu diiwaangeliyey laba nooc: mid madow iyo mid buluug ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Mobilka ZTE ee hoos timaada magaca lambarka A0722 wuxuu helayaa shahaadada TENAA